Galkacyo: Dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhashay weerar saaka aroortii ka dhacay xaafadda Wadajir. – Radio Daljir
Galkacyo: Dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhashay weerar saaka aroortii ka dhacay xaafadda Wadajir.
Juunyo 8, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, June 08- Ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay in badan 10 kalena waa dhaawac kaddib markii rag hubasani ay rasaas oodda uga qaadeen meherado shaaha lagu cabbo oo ku yaalla xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantood la tilmaamayaa in ay ahaayeen dad shacab ah, waxaana falkaani uu dhacay waabarigii hore ee saaka gaar ahaan xilligii laga soo baxay salaaddii subax.
Ma jirto faahfaahin rasmi ah oo ku aaddan sida wax ku dhaceen waxaana jira warar is-khilaafsan oo ka soo baxaya goobaha caafimaadka ee xaafadda Wadajir, kuwaasi oo muujinaya kala duwanaansho xagga baaxadda khaasaaraha ah.
Ma cadda cidda falkaan ka gaystay, mana jirto jaho illaa iyo haatan sheegatay ku lug-lahaanshadeeda falkaan weerar, hase-ahaatee dad badan ayaa qaba dhacdadaani in ay xiriir la leedahay middii habeen hore ka dhacaday agagaarka tuullada Balli-busle halkaasi oo gaari rakaab siday lagu weeraray laguna dilay 10 qof tiro ka badan intaasna lagu dhaawacay.
Qaddarin iyo xusuus: Warbixin ay noloshii Ilkacase ka qortay hay’adda Interpeace.
10 qof ayaa ku dhimatay 13 kalena waa dhaawac weerar lagu qaaday gaari rakaab siday oo ku sii jeeday Jarriiban.